Maqaa maalima filatamaa, akkasuumas geessituuwwan kanatti firooman ifteessa.
Maalimaa filatamaadhaaf maqaa galchi.
Akka ati galmeewwan dheeraa keessaa atattaammaan agarsiissuu dandeessusf, maqaa wanta, saxaatoo yk goodayyaa hiika qabu tokko ramada.
Barruu filmaataa (goodayyaawwan, saxaatoowwan, miseensota bololi'aa qofaaf)
Barruu isa iyya'aa saphaphuu keessatti yammuu maalimaan filatame hinjiraanne agarssifamuu galchi. barruun jijjiirraa akkasuuma namoota qaamii saanii guutuu hintaaneef gargaara.
Maalimaa (wanta, saxaatoo yk goodayyaa)isa maalima ammaa duratti, tartiiba koronyate keessaa dhufu tokko mul'isa. geessituu duraanii, ida'u yk jijjiiruudhaaf, tarree irraa maqaa tokko fili. Yoo goodayyaawwan koronya'uuti jiratee, goodayyaan ammaa fi goodayyaan galtee duwwaa tahuu qabu.
Maalimaa (wanta, saxaatoo yk goodayyaa)isa maalima ammaa ittaanan, tartiiba koronyate keessaa dhufu tokko mul'isa. geessituu ittaanan, ida'u yk jijjiiruudhaaf, tarree irraa maqaa tokko fili. Yoo goodayyaawwan koronya'uuti jiratee, goodayyaan ammaa fi goodayyaan galtee duwwaa tahuu qabu.
Dirqala hayyisaa maalima filatamaniif ifteessa.
Jijjiirraa qabeentoota maalima filatamanii ittisa.
Qabeentoota maalima filatamanii ammalee jalteessuu nidandeessa.
Qubannoo maalimaa filatame, galmee ammaa keessaa cufa.
Hamamtaa maalimaa filatame cufa.
Dirqalaawwan maxxansuu fi barruu maalimaa filatamaniif ifteessa.
Gulaalama galmee dubbisqofa keessaa (goodayyaawwan qofa)
Qabeentoota goodayyaa galmee keessaa isa dubbisqofa akka gulaaltu hayyama.
Maalimaa filatamaa yammuu galmee maxxanstu itti dabala.
Goodayyaa tokko keessaa qixa yaa'insa barruu durmurtaawaa ifteessa. Fuulaaf, ijaarsa durtii ya'insa barruu fayyadamuuf, tarree Ijaarsa wanta iddoochaaf siiri fayyadami irraa fili.
Title is: Dirqalawwan